ग्लान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड: अल्जाइमर रोगका लागि राम्रो औषधि - Phcoker
ग्यालेन्टामिन हाइड्रोब्रोमाइड सिंहावलोकन
गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड अल्जाइमर रोगको डिमेन्शियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधी हो। गलान्टामाइन सुरुमा स्नोड्रप प्लान्ट ग्यालेन्टस एसपीपीबाट निकालेको थियो। Galantamine पूरक तथापि एक तृतीयक क्षारीय छ जो रासायनिक संश्लेषित छ।
जे होस् अल्जाइमर डिसआर्डरको कारण राम्ररी बुझ्न सकिएन, तर यो थाहा छ कि अल्जाइमरबाट पीडित व्यक्तिहरूको दिमागमा रासायनिक एसिटिक्लोइनको स्तर कम छ। Acetylcholine संज्ञानात्मक समारोह संग सम्बन्धित छ स्मृति, शिक्षा र अन्य बीचमा संचार। यस रासायनिक (एसिटिचोलिन) मा भएको कमी को पागलपनसँग सम्बन्धित छ अल्जाइमर रोग.
ग्यालेन्टामिनले यसको कार्यको दोहोरो संयन्त्रको कारण अल्जाइमर रोगका बिरामीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। यसले एसिटाइलकोलीनको स्तर दुई तरिकामा बढाउँदै काम गर्दछ। एउटा एसिटिचोलिन बिग्रेको रोक्न हो र अर्को निकोटिनिक एसिटिचोलिन रिसेप्टर्सको एलोस्टेरिक मोडुलन मार्फत हो। यी दुई प्रक्रियाहरूले एन्जाइम, एसिटिचोलिनको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ।
जबकि यसले अल्जाइमर रोगका लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्दछ, ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड अल्जाइमर डिसअर्डरको पूर्ण उपचार होइन किनकि यसले यस रोगको मूल कारणलाई असर गर्दैन।
अल्जाइमर रोगका लक्षणहरूको उपचार गर्ने ग्यालेन्टामिन फाइदाहरूको अलावा, ग्यालेन्टामाइन सपनाको सपनासँग सम्बन्धित छ। Galantamine र lucid सपना देख्नु एक संस्था हो कि व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरु द्वारा रिपोर्ट गरीएको छ। यो galantamine प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको निन्द्राको बीचमा केहि समय लिन्छ उदाहरणका लागि sleep० मिनेटको निन्द्रा पछि। केहि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु galantamine र lucid काल्पनिक लाभ को लाभ को लागी अनुगमित तालिका को माध्यम बाट अनावश्यक साइड इफेक्ट बाट बच्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
ग्यालेन्टामिन पूरक ट्याब्लेट रूपहरू, मौखिक समाधान र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलमा देखा पर्दछ। यो सामान्यतया खाना र धेरै पानी पिउँदा अनावश्यक साइड इफेक्टबाट बच्नको साथ लिइन्छ।
सामान्य galantamine पक्ष प्रभाव मतली, बान्ता, टाउको दुख्ने, पेट असुविधा वा पीडा, मांसपेशि कमजोरी, चक्कर आना, उनीतपन, र पखाला समावेश छ। यी galantamine हाइड्रोब्रोमाइड साइड इफेक्ट सामान्यतया हल्का हुन्छन् र जब तपाईं यो औषधि लिन शुरू गर्नुहुन्छ। तिनीहरू समयको साथ हराउन सक्छ, यद्यपि तिनीहरू जानु हुँदैन भने तपाईंको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। त्यहाँ केही असामान्य तर गम्भीर साइड इफेक्टहरू पनि हुन सक्छन् जस्तो कि सास फेर्न समस्या, छाती दुखाइ, पेटको गम्भीर दुखाइ, पेशाब गर्न समस्या, दौरा, अन्यमा बेहोशी।
（१ Gala गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड के हो?
गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड एक सिफारिस औषधि हो जुन हल्का वा मध्यम उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ dementia अल्जाइमर रोगसँग सम्बन्धित। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क विकार हो जुन सामान्यतया मेमोरी र सोच्ने क्षमता, शिक्षा, संचार र दैनिक कार्यहरू सम्पन्न गर्न क्षमतालाई नष्ट गर्दछ।
ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड औषधीहरूले प्रगति भएको अल्जाइमर डिसअर्डरको उपचार नगर्न सक्छन तर अन्य अल्जाइमर औषधीको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो तीनवटा मुख्य रूपहरूमा हुन्छ भिन्न शक्तिहरूका साथ। ग्यालेन्टामाइन फारामहरू मौखिक समाधान, ट्याब्लेटहरू र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल हुन्।
? २） यो किन प्रयोग भएको छ? यो औषधि कसले लिनु पर्छ?
ग्लान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड अल्जाइमर रोगको हल्कादेखि मध्यम लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। ग्लान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड अल्जाइमर डिसअर्डरको उपचारको लागि संकेत गरिएको छैन किनकि यसले रोगको अंतर्निहित डिजनरेटिभ प्रक्रियामा असर गर्दैन।
ग्लान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड अल्जाइमर रोगका हल्कादेखि मध्यम लक्षणहरू भएका मानिसहरूले प्रयोगको लागि संकेत गर्दछ।
（3） यसले कसरी काम गर्दछ?
गलान्टामाइन ड्रग्सको वर्गमा हुन्छ जसलाई एसिटिचोलिनेस्टेरासे इन्हिबिटर भनिन्छ।
ग्यालेन्टामाइनले दुई किसिमले एन्जाइम, एसिटिचोलिनको मात्रा बढाउन काम गर्दछ। पहिले यो एक उल्ट्याउन र प्रतिस्पर्धी acetylcholinesterase अवरोधकर्ताको रूपमा कार्य गर्दछ यसैले मस्तिष्कमा एसिटाइलको बिच्छेद रोक्न। दोस्रो, यसले दिमागमा निकोोटिनिक रिसेप्टर्सहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्दछ थप एसिटिचोलिन रिलीज गर्न।
यसले मस्तिष्कमा एसिटाइलकोइनको मात्रा बढाउँछ, जसले डिमेन्शियासँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
Galantamine सोच्न र फारम गर्न क्षमता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ स्मृति साथै Alzheimer रोग को बिरामीहरु मा संज्ञानात्मक समारोह को घाटा धीमा।
ग्लान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइडले अल्जाइमरमा फाइदा पुर्‍याउँछ's रोग
अल्जाइमर रोगको कारण मस्तिष्कको कोषहरू बिग्रेको हुन्छ र अन्तत: मर्न जान्छ। वास्तविक कारण राम्रोसँग परिचित छैन तर यो प्रगतिशील रोगले कम संज्ञानात्मक कार्यमा निम्त्याउँछ जस्तै स्मृति, सिक्ने, सोच र दैनिक कार्यहरू गर्ने क्षमता। अल्जाइमर रोगका बिरामीहरूको बारेमा के थाहा छ त्यो रासायनिक एसिटिचोलिनको निम्न स्तर हो।
ग्यालेन्टामाइन अल्जाइमर रोगसँग सम्बन्धित डिमेन्शियाका लक्षणहरूको उपचारमा यसको प्रयोगको दोहोरो मोडको कारण देखा पर्दछ। यसले acetylcholine को स्तर बढाउँदछ, संज्ञानात्मक वृद्धिमा एक प्रमुख इन्जाइम। ग्यालेन्टामाईन एक उल्ट्याउने र प्रतिस्पर्धी acetylcholinesterase अवरोधकर्ताको रूपमा कार्य गर्दछ यसैले acetylcholine को बिग्रन रोक्न। यसले निकोटिनिक रिसेप्टर्सहरूलाई थप एसिटिचोलिन रिलीज गर्न पनि उत्प्रेरित गर्दछ।
अन्य सम्भावित लाभहरू
(१) एन्टिऑक्सिडन्ट सरनेम
अक्सिडेटिभ तनाव पार्किन्सन रोग, अल्जाइमर रोग, मधुमेह जस्ता धेरै डिजेनेरेटिव डिसआर्डरको कारणका रूपमा चिनिन्छ। यो स्वाभाविक रूपमा उमेरको साथ देखा पर्दछ तर जब त्यहाँ फ्रि रेडिकल र एन्टिआक्सिडन्टहरू बीच असंतुलन हुन्छ, टिश्यु क्षति हुन सक्छ।
ग्यालेन्टामाइन प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजातिहरू सफा गर्न जानिन्छ र न्युरोन्सलाई ऑक्सीडेटिव तनावले क्षतिग्रस्त रोक्नको लागि सुरक्षा प्रदान गर्दछ। ग्यालेन्टामाइनले एसिटिचोलिनको स्तर बढाउँदै प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजातिको अत्यधिक उत्पादन कम गर्न सक्छ।
ग्यालेन्टामिनले जीवाणुरोधी गतिविधि प्रदर्शन गर्दछ।
यो औषधि कसरी लिने?
म Galantamine हाइड्रोब्रोमाइड लिनु अघि
अन्य औषधिहरू जस्तै यो पनि galantamine हाइड्रोब्रोमाइड लिनु अघि आवश्यक सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हो।
तपाइँको डाक्टरलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाइँ ग्यालेन्टामाइन वा यसको कुनै पनि निष्क्रिय सामग्रीमा एलर्जी छ।
निर्धारित औषधिहरू, ओभर-द-काउन्टर औषधी, हर्बल औषधि वा कुनै पनि प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादनहरू लगायत तपाईंले लिइरहनुभएको सबै औषधीहरू खुलाउनुहोस्।
तपाईले डाक्टरलाई सूचित गर्नु राम्रो हो जुन तपाईले समावेश गरिरहनु भएको अन्य सर्तहरूको बारेमा बताउनु हुन्छ;
तीव्र पेट दुख्ने,
विशेष गरी पेट वा मूत्राशयमा भर्खरको अपरेसन।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सूचित गर्नुपर्नेछ कि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भवती हुने कि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईं स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ ग्यालेन्टामाइन सप्लीमेन्ट लिँदा गर्भवती हुनुभयो भने, तपाइँले चाँडै तपाइँको डाक्टरसँग कुरा गर्नुपर्छ।
तपाईको डाक्टरलाई यो भन्नु महत्वपूर्ण छ कि तपाईले दन्त शल्यक्रिया लगायत कुनै शल्यक्रिया गर्नु भन्दा अघि ग्यालेन्टामाईन लिनु भएको छ।
Galantamine हाइड्रोब्रोमाइड प्रभाव तन्द्रा समावेश छ। तपाईं ड्राइभिंग र अपरेटि machinery मेशिनरी बेवास्ता गर्नुपर्छ।
ग्यालेन्टामाइन र रक्सी सेवन गर्दा ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइडको तन्दुरुप बढ्न सक्छ
ii। खुराक सिफारिस गरियो
(1) अल्जाइमरको कारण डिमेन्शिया's रोग
अल्जाइमर रोगको उपचारको लागि ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड जेनेरिक फार्ममा देखा पर्दछ र साथै ग्यालेन्टामिन ब्रान्ड नामहरू रजाडाइन जस्ता पहिले रेमिनाइल भनेर चिनिन्छन्।
ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड तीन शक्तिहरूमा तीन भिन्न शक्तिहरूमा देखा पर्दछ। मौखिक ट्याब्लेट mg मिलीग्राम, mg मिलीग्राम र १२ मिलीग्राम ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ। मौखिक समाधान mmg / ml को एकाग्रतामा बेचिन्छ र प्राय जसो अवस्थाहरूमा १०० मिलीलीटर बोतलमा। मौखिक विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल उपलब्ध छ 8 मिलीग्राम, १ mg मिलीग्राम र २ mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू।
जबकि दुबै मौखिक ट्याब्लेट र मौखिक समाधान दुई पटक लिन्छ मौखिक विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल दैनिक रूपमा एक पटक लिन्छ।
सुरूवात galantamine खुराक परम्परागत फारमहरूको लागि (मौखिक ट्याब्लेट र मौखिक समाधान)4मिलीग्राम दैनिक दुई पटक हो। खुराक तपाईको बिहान र साँझको खानाको साथ लिनु पर्छ।
विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलको लागि सिफारिस गरिएको प्रारम्भिक खुराक mg मिग्रि दैनिक बिहानको खानाको साथ लिइन्छ। विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल दिनभर औषधीको ढिलो रिलीज सक्षम गर्न पूर्ण लिनुपर्दछ। त्यसकारण क्याप्सुललाई कुचुर्नुहोस् वा काट्नुहोस्।
एक रखरखाव खुराक को लागी पारंपरिक फार्म मा galantamine को तपाइँको सहनशीलता को आधार मा दैनिक daily मिलीग्राम वा mg मिलीग्राम लिनु पर्छ र हरेक १२ घण्टा कम्तिमा weeks हप्ताको अन्तरालमा mg मिलीग्राम बढ्नु पर्छ।
विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल दैनिक १ 16-२24 मिग्रि र mg हप्ताको अन्तरालमा mg मिलीग्राम वृद्धिमा कायम राख्नुपर्दछ।
ग्यालेन्टामिन लिने बेला केहि महत्त्वपूर्ण विचार
सँधै ग्यालेन्टामाइन तपाईंको खाना र प्रशस्त पानीको साथ लिनुहोस्। यसले अनावश्यक ग्यालेन्टामाइन साइड इफेक्टबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
प्रत्येक दिन एकै पटक सिफारिस गरिएको ग्यालेन्टामाइन खुराक लिन सल्लाह दिइन्छ। यदि तपाईंले एक डोज याद गर्नुभयो भने, यो जति सक्दो चाँडो लिनुहोस् यदि अर्को खुराक नजीक छैन भने। अन्यथा खुराक स्किप गर्नुहोस् र तपाइँको नियमित तालिकासँग जारी राख्नुहोस्। जे होस्, यदि तपाइँ लगातार days दिन को लागी तपाइँको खुराक याद गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको मेडिकल चिकित्सकलाई कल गर्नुहोस् जसले तपाइँलाई तपाइँको डोज सुरु गर्न सल्लाह दिन सक्छ।
उद्देश्य गरिएको उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ, तपाईंको डाक्टरले न्यूनतम weeks हप्ताको अन्तरालमा यसलाई बढाउँदै तपाईंको खुराक समायोजित गर्न सक्दछ। तपाईंको लागि ग्यालेन्टामिन खुराक समायोजित नगर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल दिइयो भने, यो चुब्ने वा क्रश नगरी पूरै निल्न निश्चित गर्नुहोस्। यो किनभने ट्याब्लेट दिनभर बिस्तारै ड्रग जारी गर्न परिमार्जन गरिएको छ।
मौखिक समाधान प्रिस्क्रिप्सनको लागि, सधैं दिइएका सल्लाहहरू पालना गर्नुहोस् र औषधिलाई नौं-अल्कोहोलिक पेयमा थप्नुहोस् जुन तत्काल लिनुपर्दछ।
(2) वयस्क खुराक (उमेर १ 18 बर्ष र अधिक)
विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलको शुरुवात खुराक छ mg मिलीग्राम दैनिक बिहान एक पटक लिन्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईको डोज समायोजित गर्न कम्तिमा mg हप्ता पछि mg मिग्रि बढाएर यसलाई बढाउन सक्छ। मर्मतका लागि तपाईले १ doctor-२8 मिग्रा लिनु पर्छ तपाईको डाक्टरले सल्लाह गरे अनुसार।
छिटो रिलीज खुराकको लागि, सुरू खुराक mg मिलीग्राम दैनिक दुई पटक खानाको साथ लिइन्छ त्यसैले day मिलीग्राम प्रति दिन। न्यूनतम weeks हप्ताको अन्तराल पछि तपाईको डाक्टरले4मिग्रि दैनिक खुराक बढाउन सक्छ।
(3) बाल खुराक (उमेर ०-१-0 बर्ष)
ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड प्रभाव बच्चाहरू (०-१-0 वर्ष उमेर) मा अध्ययन हुँदैन, त्यसैले यो केवल चिकित्सा पेशेवरहरूले सल्लाहको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
iii। यदि एक ओभरडोज लिएको छ भने के गर्ने?
यदि तपाईं वा बिरामीहरूले तपाईंले निगरानी गरिरहनुभएको छ भने ग्यालेन्टामाइन खुराकको अधिक मात्रा लिन्छ भने, तपाईंले आफ्नो डाक्टर वा विषादी नियन्त्रण केन्द्रमा तुरुन्त कल गर्नुपर्नेछ। तपाईं छिट्टै नै नजिकको आपतकालीन एकाइमा जान सक्नुहुनेछ।
ग्यालेन्टामाइन ओवरडोजसँग सम्बन्धित सामान्य लक्षणहरू गम्भीर मतली, पसीना, गम्भीर पेटको पेटमा सास फेर्ने समस्या, मांसपेशीहरू झर्को वा कमजोरी, दौरा, बेहोशी, अनियमित मुटुको धड्कन र पेशाब गर्दा कठिनाई हो।
तपाईको डाक्टरले तपाईलाई केहि औषधी दिन सक्नुहुन्छ जस्तै एट्रोपिनले ओभरडोजिंगसँग सम्बन्धित ग्यालेन्टामाइन साइड इफेक्ट रिभर्स गर्न।
गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड प्रयोग गर्नका साथ दुष्प्रभावहरू के के हुन्?
जबकि ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइडले अल्जाइमर रोगबाट पीडित मानिसहरूलाई स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्दछ, त्यहाँ केही अनावश्यक galantamine साइड इफेक्ट हुन सक्छ। त्यहाँ छन् galantamine साइड इफेक्ट त्यो सक्छ तर सबैजनाले तिनीहरूलाई अनुभव गर्न सक्दैनन्।
सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू जुन तपाईले ग्यालेन्टामिनको प्रयोगको साथ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ;
यी लक्षणहरू सामान्य हुन्छ जब तपाईं ग्यालेन्टामिन लिन थाल्नुहुन्छ तर सामान्यतया हल्का हुन्छन् र औषधीको निरन्तर प्रयोगको साथ हराउछ। यद्यपि, यदि तिनीहरू अडिग रहन्छन् वा गम्भीर हुन्छन् भने डाक्टरलाई पेशेवर सल्लाहका लागि कल गर्नुहोस्।
केहि व्यक्तिले गम्भीर साइड इफेक्टको अनुभव गर्न सक्दछन्। यी प्रतिकूल प्रभावहरू असामान्य हुन् र तपाईले उनीहरूलाई याद गरे पछि तपाईको डाक्टरलाई बोलाउनु पर्छ।
गम्भीर साइड इफेक्ट समावेश:
गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया जस्तै छालामा दाग, खुजली र कहिलेकाँहि अनुहार, घाँटी वा जिब्रोमा सूजन।
धीमे मुटुको दर, थकान, चक्कर, र बेहोशी सहित atrioventricular ब्लक को लक्षण
पेटमा अल्सर र रक्तस्राव
बान्ताहरू रक्तरंजित छन् वा कफि मैदान जस्ता देखा पर्दछ
दम वा अन्य फोक्सोको रोग भएका व्यक्तिहरूमा फोक्सोको समस्याको प्रगति
पेशाब गर्न समस्या
गम्भीर पेट / पेट दुखाई
पेशाब गर्दा बर्षेपन वा पीडा
केहि पोस्ट मार्केटिंग galantamine साइड इफेक्टहरू रिपोर्ट गरिएको छ कि;
दौरा / आक्षेप वा फिट
टिन्निटस (कानमा बजिरहेको)
atrioventricular block या पूर्ण हृदय ब्लक
कलेजो एंजाइम मा एक उठाउन
रातो वा बैजनी रsh्ग (एरिथेमा मल्टिफॉर्म)।
यो सूचि धेरैले सबै ग्यालेन्टामिन साइड इफेक्टहरू समावेश गर्दैन। यसैले तपाईको चिकित्सा व्यवसायीलाई कल गर्न सल्लाह दिइन्छ यदि तपाईले यो औषधि लिईएको बेला कुनै अनौंठो प्रभाव अनुभव गर्नुभयो
कस्तो प्रकारको ड्रग्सले galantamine हाइड्रोब्रोमाइडसँग अन्तरक्रिया गर्दछ?
ड्रग अन्तर्क्रियाले केही ड्रग्स प्रभावलाई बुझाउँदछ अरूलाई। यी अन्तर्क्रियाले केही औषधिहरूले काम गर्ने तरीकालाई असर गर्दछ र कम प्रभावकारिता गर्न सक्दछ वा साईड इफेक्टको घटनालाई छिटो बनाउन सक्छ।
त्यहाँ ज्ञात छन् galantamine हाइड्रोब्रोमाइड अन्तरक्रिया अन्य लागूपदार्थको साथ। तपाइँको डाक्टर पहिले नै केहि औषधि कुराकानी को बारे मा सचेत हुन सक्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले औषधिको अन्तरक्रियाको सम्भावनालाई कम गर्न तपाईंको केहि खुराक परिवर्तन गर्न सक्षम गर्दछ वा औषधी पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दछ। यो तपाइँको लागि औषधि स्रोतको लागि लाभदायक हुन सक्छ र विशेष गरी उहि स्रोतबाट प्रिस्क्रिप्शन जस्तै उचित संयोजनहरूको लागि फार्मेसी।
तपाईले लिनु भएका औषधीहरूको सूची राख्नुहोस् र कुनै सूचना भन्दा पहिले तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई यस जानकारीको खुलासा गर्नुहोस्।
केही galantamine हाइड्रोब्रोमाइड अन्तरक्रियाहरू हुन्;
यी औषधिहरू डिप्रेसनको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ र यसले असर पार्ने प्रभावका रूपमा ग्यालेन्टामाइनले कार्य गर्न सक्छ। यी औषधीहरूले amitriptyline, desipramine, nortriptyline र doxepin समावेश गर्दछ।
एलर्जीको उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया
यी एलर्जी औषधीहरूले galantamine काम गर्ने तरीकामा असर गर्न सक्छ।
यी औषधीहरूले क्लोरफेनिरामाइन, हाइड्रोजिजाइन र डिफेनहाइड्रामिन समावेश गर्दछ।
मोशन सिक्नेस औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया
यी औषधिहरूले ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइडको गतिविधिलाई प्रभाव पार्छन्।
यी औषधीहरूले डायमिथाइड्रेनेट र मेक्लीजाइन समावेश गर्दछ।
अल्जाइमर रोग औषधि
औषधीहरूले galantamine हाइड्रोब्रोमाइड जस्तै समान कार्य गर्दछ। जब यी औषधिहरू सँगै प्रयोग गरिन्छन् भने यसले ग्यालेन्टामाइनको सम्भावित साइड इफेक्टहरू सामना गर्ने तपाईंको जोखिम बढाउन सक्छ। यी औषधीहरूले डोडेपिजिल र रियास्टिग्माइन समावेश गर्दछ।
यद्यपि, केहि संयोजनहरूसँग सिनर्जेटिक प्रभावहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।
ग्लान्टामाइन र मेमेन्टाइन अल्जाइमर रोगको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। जबकि Galantamine acetylcholinesterase अवरोधकर्ता memantine एक NMDA रिसेप्टर विरोधी हो।
जब तपाईं ग्यालेन्टामाइन र मेमेन्टाइन सँगै लिनुहुन्छ, तपाईं एक्लो galantamine प्रयोग गर्नुभन्दा तपाईंसँग राम्रो संज्ञानात्मक बृद्धि हुन्छ।
यद्यपि, केहि पहिलेका अध्ययनहरूले संज्ञानात्मक कार्यमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गर्न सकेनन् जब ग्यालेन्टामाइन र मेमेन्टाइन सँगै प्रयोग गरियो।
ओभरएक्टिभ मूत्राशयको लागि लागूपदार्थको साथ अन्तर्क्रिया
यी औषधीहरूले galantamine कसरी काम गर्दछ। यदि तपाईं सँगै प्रयोग गर्नुभयो तपाईं galantamine बाट काट्न सक्नुहुन्न। यी औषधिहरूले डेरिफेनासिन, टोल्टेरोडिन, अक्सीब्युटेनिन र ट्रोस्पियम समावेश गर्दछ।
यी औषधीहरूले dicyclomine, loperamide र hyoscyamine समावेश गर्दछ। तिनीहरूले galantamine कसरी काम प्रभावित गर्दछ।
ग्यालेटामाइन र ओटिज्म ड्रग्स
जब galantamine र autism ड्रगहरू जस्तै Risperidone सँगै प्रयोग गरिन्छ। यो चिड़चिड़ापन, सुस्ती, र सामाजिक वापसी जस्ता स्वतन्त्रताको केही लक्षण सुधार गर्न रिपोर्ट गरिएको छ
हामी यो उत्पादन कहाँ पाउन सक्छौं?
ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड तपाईंको स्थानीय फार्मासिष्टबाट वा अनलाइन स्टोरहरूबाट निकाल्न सकिन्छ। को ग्राहकहरु galantamine खरीद यो स्वीकृत फार्मासिष्टबाट हो जुन औषधि सिफारिश गर्न सक्छ। यदि तपाईं galantamine विचार यो सम्मानित संगठनहरु बाट खरीद र यो मात्र आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्धारित को रूप मा प्रयोग।
Galantamine डिमेन्शियासँग सम्बन्धित लक्षणहरूको उपचार गर्नका लागि एक राम्रो पर्चेको औषधि हो अल्जाइमरको रोग तथापि यो रोगको लागि ईलाज छैन किनकि यसले अल्जाइमर रोगको अन्तर्निहित प्रक्रियालाई हटाउँदैन।
यो अन्य रणनीतिहरूको साथमा अल्जाइमर रोग चिकित्सामा एक घटकको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। मस्तिष्कमा एसिटिचोलिन बढाउनको यसको दोहोरो संयन्त्रको कारण यो एक उत्कृष्ट पूरक हो। यसले ऑक्सीडेटिव तनाव रोक्दै न्यूरल प्रोटेक्शनमा थप लाभहरू प्रदान गर्दछ।
Wilcock GK। Lilienfeld S. Gaens E. प्रभावकारिता र हल्का देखि मध्यम अल्जाइमर रोगका बिरामीहरूमा galantamine को सुरक्षा। 2000; 321: 1445-1449।
लिलिनफेल्ड, एस, र प्यारेस, डब्ल्यू। (२०००) ग्यालेन्टामाइन: अल्जाइमर रोगका बिरामीहरूलाई थप फाइदाहरू। डिमेंशिया र जीरियट्रिक संज्ञानात्मक विकारहरू, 11 Suppl 1, १ – -२–। https://doi.org/19/27।
त्सेत्कोवा, डी, ओब्रेस्कोभा, डी।, झेलेवा-दिमित्रोभा, डी।, र सासो, एल। (२०१ 2013) ग्यालेन्टामाइन र यसको केही डेरिवेटिभहरूको एन्टिऑक्सिडन्ट गतिविधि। वर्तमान औषधीय रसायन विज्ञान, 20(36), 4595–4608. https://doi.org/10.2174/09298673113209990148.
Loy, सी, र स्नेइडर, L. (२००)) अल्जाइमर रोग र हल्का संज्ञानात्मक कमजोरीका लागि ग्यालेन्टामिन। व्यवस्थित समीक्षाको कोचरेन डेटाबेस, (१), CD1। https://doi.org/001747/10.1002.CD14651858.pub001747।
१.ग्यालेन्टामिन हाइड्रोब्रोमाइड अवलोकन
G.ग्यालेटामाइन हाइड्रोब्रोमाइडले अल्जाइमर रोगमा फाइदा पुर्‍याउँछ
O.अतिरिक्त सम्भावित लाभहरू
This. कसरी यो औषधि लिने?
Gala. गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड प्रयोग गर्नका साथ दुष्प्रभावहरू के के हुन्?
Hat. कुन प्रकारको ड्रग्सले ग्यालेन्टामिन हाइड्रोब्रोमाइडसँग अन्तरक्रिया गर्दछ?
W. हामी कहाँबाट यो उत्पादन पाउन सक्छौं?